Toyota Hilux Surf 2006 (#681164) ကို Insein မြို့နယ်တွင်ေ... | CarsDB
Lot Number: #681164
Toyota Hilux Surf 2006 . ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကြသွင်းထားပြီးအမည်ပေါ်က်ကားတစ်စီးပါ . အတွင်းခန်းအသားရောင် ခဏခဏညစ်ပတ်လွန်းလို့ ခုံအမဲရောင်ပြောင်းထားပါသည်. စိတ်ဝင်းစားဈေးနီးစပ်မှဆက်သွယ်ပါ ကားစစ်ခံပါသည်. Thank you so much . အင်းစိန် စော်ဘွားကြီးကုန်းတွင် ကားကြည့်နိုင်ပါသည် ..
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Zaw myint tun မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Hilux Surf 2006 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။